Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Guudlaawe oo booqday warshadii hore ee dharka Balcad – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Dhexe Cali Guudlaawe Xuseen ayaa booqday warshadii hore ee dharka ee magaalada Balcad iyo mashaariic horumarineed oo laga hirgalinayay degmada Balcad.
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe ayaa waxaa uu ka dhagaystay warbixino guddoomiyaha degmada Balcad Maxamuud Maxamed Saney iyo qaar ka mid ah shaqaalihii hore ee warshadii dharka ee SOMALITEX kuwaasoo weli gacanta ku haya warshadda dharka.
Mas’uuliyiinta warshada dharka ayaa waxa ay u sheegeen Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe in warshada ay howlgali karto haddii loo keeno qalab ka maqan oo muhiim u ah in ay howlgasho. Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ku ammaanay shaqaalaha warshadii dharka ee Balcad sida ay ugu dhabar adeygeen ayna u badbaadiyeen warshada. Waxana uu guddoomiyaha gobolka uu u ballanqaaday in ay heli doonaan tixgelintooda uuna ku dadaali doono sidii dib ay u howlgali lahayd warshada, isagoo xusay in uu u gudbin doono baahida warshada mas’uuliyiinta wasaarada warshadaha ee dowlada Federalka Soomaaliya.
Warshada dharka ee Balcad ayaa ah warshada kaliya ee ka badbaaday burburkii ku yimid warshadihii ay lahayd dowladii Soomaaliya kadib markii ay bilowdeen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka hase ahaatee warshada ayaan helin cid wax ka qabata.
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Guudlaawe ayaa sidoo kale booqday qaabka ay u socoto howlo lagu dayactirayo wadada isku xirta degmada Balcad iyo degmada Jowhar oo ku burburtay fatahaadihii ka dhacay gobolka Sh/dhexe dhamaadkii sanadkii hore.
Dayactirka wadadan oo ah mid muhiimad weyn u leh guud ahaan ummada Soomaaliyeed maadaama ay tahay wadada kaliya ee isku xirta magaalo madaxda dalka ee Muqdisho iyo gobolada dhexe iyo kuwa Waqooyi ee dalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha ayaa ku baraarujiyay howlwadeenada dayactirka ka wada in ay dadajiyaan howshooda maadaama la galay xilligii deyrta ee ay roobabku da’ayeen.
Gaadiid faro badan oo burburka wadada uga weecan jiray ayaa bilaabay hadda in ay isticmaalaan wadada laamiga oo dayactirka lagu bilaabay iyadoo hore maamulka gobolka Sh/dhexe uu soo dhamaystiray dayactir lagu samaynayay wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo deegaanka Kongo